WordPress 3.3 Tonga | Martech Zone
WordPress 3.3 Tonga
Talata, Desambra 13, 2011 Talata, Desambra 13, 2011 Douglas Karr
WordPress 3.3 tonga! Ny fampiasana ny interface interface dia fanatsarana. Rehefa nanokatra ny tabilao ny WordPress, dia toa nanapa-kevitra ny hanao lozisialy vaovao ny mpamorona Plugin rehetra any. Izany no nahatonga ny rafitry ny menio tao amin'ny WordPress nahasosotra. Ny menio style mouseover vaovao dia manamora kokoa ny fivezivezena ary mahita izay ilainao. Ny interface Administrative dia miasa tsara amin'ny tablette ihany koa.
Endri-javatra mahaliana iray nampiana ilay API dia ny fahaizana ampidiro ny tonian-dahatsoratra WordPress. Manokatra ny fotoana ahafahan'ny mpamorona mampiditra ny pejin-dry zareo manokana amin'ireo mpampanonta. Ny tonian-dahatsoratra dia nohatsaraina mba hampidirina ny interface drag and drop, mamela ireo rakitra marobe hidina ao!
Toa ny fitomboan'ny Tumblr mihodina ihany koa ny lohany amin'ny WordPress… velona izao ilay mpanafatra Tumblr :). WordPress dia namoaka ny lisitry ny fanatsarana rehetra ao WordPress 3.3 amin'ny tranokalany.
Martech Azo alaina amin'ny Google Currents ankehitriny